Chitatu 27 Ndira 2021
Chipiri 26 Ndira 2021
Muvhuro 25 Ndira 2021
Svondo 24 Ndira 2021
Tiered Trolley Iyi nhanho trolley ndechimwe chezvinhu zvakagadzirwa nemugadziri weK mutsara weiyo QuISO brand. Iyo yakagadzirwa nehunyanzvi hwakashongedzerwa huni yakasimba huni. Yayo yakasimba uye ine dhizaini inoita kuti ive yakanaka pakushandira doro patafura yekudyira. Nekuchengetedza uye kusimudzira kwesevhisi, magirazi anomisikidzwa kubva pamushonga, mabhodhoro acho akasvinudzwa neasina kutsvedza, mavhiri eindasitiri ane kutenderera kwakanyarara uye chinyararire.
Mugovera 23 Ndira 2021
Multfunctional Trolley VaPatrick Sarran vakagadzira iyo Km31 yehuwandu hukuru hweresitoreti inoshandisa. Chikonzero chikuru chaive kushanda kwemazhinji. Ngoro iyi inogona kushandiswa zvakashama pakushumira tafura imwe, kana mumutsara nevamwe kuti idhodhi. Mugadziri akagadzira yakadudzirwa Krion yepamusoro yakaiswa pamusoro imwechete yakagadzirwa vhiri yaakange agadzira yemhando dzakasiyana dzematororodzi akadai sa KEZA, uye gare gare Kvin, Herbal Tea Garden, uye Kali, pamwechete vakatumidza zita ra K. Kuomarara kweKrion kwakabvumira kupera kwemwenje zvakakwana kuti isarudzwe, pamwe nekusimba kunodiwa kune yakasvibirira yakasimbiswa.
calendar 2013 “Town” Khalenda Chishanu 5 Kurume
calendar 2013 “Rocking Chair” Kalendari China 4 Kurume
calendar 2013 “Farm” Kalendari Chitatu 3 Kurume
Chilled Cheese Trolley Chilled Renje Trolley Inopisa Doro Sevhisi Nezvitsva Zvidyarwa Champagne Trolley Tiered Trolley Multfunctional Trolley